Zvemutemo ziviso | Green Renewables
Renewables uye Greens ndezve portal network Mashoko Blog, kambani ndeyayo AB Internet Networks 2008 SL, CIF: B85537785, ine kero kuC / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Saiti iyi inogona zvakare kuitisa web beacon (inozivikanwawo se webhu tsikidzi). Iyo web beacon Iwo anowanzo kuve madiki mifananidzo epikiseli imwe nepikisi imwe, inoonekwa kana isingaonekwe, yakaiswa mukati mekodhi kodhi yemapeji ewebhu ewebhusaiti. Iyo web beacon serve uye zvinoshandiswa nenzira yakafanana ku Cookies. Mukuwedzera, iyo web beacon Ivo anowanzo shandiswa kuyera traffic yevashandisi vanoshanyira peji rewebhu uye kugona kuwana maitiro evashandisi vesaiti.
Iwe une rumwe ruzivo nezve web beacon uye: Wikipedia
Saiti ino inoyerera traffic nemhinduro dzakasiyana dzaunogona kushandisa Cookies o web beacon kuongorora zvinoitika pamapeji edu. Isu parizvino tinoshandisa mhinduro dzinotevera kuyera traffic yeiyi saiti. Unogona kuona rumwe ruzivo nezve zvakavanzika mutemo wega wega wemhinduro dzinoshandiswa pachinangwa ichi:
Google Adsense, Dzvanya kaviri, DART __gadhi Inounganidza ruzivo nezve mushandisi wekushandisa kushandira kushambadzira - Mutemo weGoogle Adsense zvakavanzika
Addon: Adconion zvakavanzika mutemo
Buysold: Mutemo weBuysellads wega wega - Terms uye mamiriro